महोत्तरी : गौशालाको विकासले गति लिँदै – The Public Today
महोत्तरी : गौशालाको विकासले गति लिँदै
विजय कुमार सिंह साउन २, २०७८ ९:५४ am
बर्दिवास, साउन २ गते । महोत्तरीको गौशाला सम्भावनाले मात्रै होइन् आफैमा ऐतिहासिक ठाउँ हो । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गौशाला नगरपालिकाको प्रमुखमा शिवनाथ महतो निर्वाचित भए ।उनको नेतृत्वमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गरेर नमुना बनाउने कामको थाल्नी भएको छ ।
गौशाला कृषिहरुको बाहुल्यता भएको नगरपालिका हो । उनले चुनावकै बेला किसानहरुको खेत खेतमा सिंचाई पु¥याउने लक्ष्य लिएका थिए । सिचाईका लागि नगरभरी बोडिङ्ग जडान काम गरियो । एक सय वटा बोडिङ्ग भयो । त्यसै गरेर किसानले उत्पादन गरेको सागसब्जी, तरकारीलाई कुहिन नदिन कोल्ड स्टोर बनाउने काम गरियो । किसानहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रत्येक वडामा कृषि सहकारी मार्फत मलखादको वितरण गर्न सफलता प्राप्त गरेको छ । महँगो मूल्यमा कलाबजारीको मलखाद्य किन्नु पर्ने किसानको बाध्या सधैंका लागि हट्यो ।
गौशाला नगरपालिकाका प्रमुखका अनुसार, सानो पुँंजी लगाएर सानो पसल गर्छ भने उसको बच्चाहरुलाई काठमाडांै वा विदेश पठाएर पढाउन सक्छ भने किसानका छोरा १० विद्या जग्गा जोतेर पनि उसको बच्चाहरु हाम्रो समाजमा राम्रो संग पढाउने स्थिति छैन । किनभने खेती गर्दा नाफा भन्दा लगानी धेरै भयो । आम्दानी निकै कम हुन्छ । खेतीमा लागत क मगर्न नगरपालिकाले किसानहरुलाई आधुनिक औजारहरूको व्यवस्था गरेको छ ।
यो नगरपालिकाका कोही पनि बिरामी भए उपचार गराउन बाहिर नजाउस् भनी सुविद्या सम्पन्न अस्पताल निर्माण भइरहेको छ ।गौशाला नगरपालिकाको पाँच वटा वडामा नयाँ स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिएको छ ।त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी राखेर सेवा प्रदान गरिएको छ ।स्वास्थ्य चौकीहरुलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन योजना अनुसार काम जारी छ ।
नगरभरी पाँच वटा आद्यारभूत स्वास्थ्य चौकी र ३ वटा वर्थिङ्ग सेन्टर संचालनमा छ ।यहाँका दिदीबाहिनी, चेलिवेटीलाई सुत्केरी गराउनलाई बाहिर जानुपर्ने बाध्यता अब हटेको छ । कान्तिबजार, बेलगाछी र रामनगर स्वास्थ्य चौकीमा वर्थिङ्ग सेन्टर संचालित छन् ।
जटिल प्रकारका समस्या देखिएमा गर्भवती महिलाहरुलाई सुत्केरी गराउन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौशालामा पठान्छ । यहाँ पनि सुत्केरी गराउन कठिन भए प्रदेश नम्बर २ भित्र कुनै ठाउँमा लैजानु पर्ने भएमा गौशाला नगरपालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरेको छ ।
सुत्केरी गराउन बाहिर जानु नपरोस् भनि गौशाला नगरपालिकाले १५ सैयाको अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । यो अस्पातलमा करिब १८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्राथमिक उपचार केन्द्र गौशालामै अहिले क्षयरोग निदानका लागि जीन स्पोट संचालन गरिएको छ ।सर्लाही, रौतहटसम्मका विरामीहरु क्षयरोग टेष्ट गराउन आउँछन् । यहाँ एक्सेरे सेवा पनि छ ।
नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट दक्ष चिकित्सक राखेर आफ्ना विरामी नागरिकहरुको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।त्यसैगरि नेपालबाट पाउने औषधीका साथै थप औषधी नगरपालिका बाट व्यवस्था निःशुल्क वितरण गरिन्छ । सुगर, प्रेसरको औषधी वितरण गर्नुका साथै आयुर्वेद तर्क नागकिर आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिएकोे छ । गौशालाको १२ नम्बर वडामा आयुर्वेद अस्पातलको निर्माण अघि बढाइएको छ ।
शिक्षा तर्क डिप्लोमा स्तरका आयुर्वेद बिषयको कक्षा संचालन भइरहेको छ । गौशालास्थित रामनगर र रजखोरको बीचमा इन्जिनियरिङ्ग कलेज संचालनका भौतिक पूर्वधार निर्माणको काम भइरहेको छ । नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा उलेख्य सुधार भएको छ ।
जुन स्कुलमा शिक्षकको आवश्यकता छ। त्यो स्कुलमा शिक्षक स्वंयम सेवक शिक्षक भर्ना गरेर शिक्षण क्रियाकलाप अगाडी बढाईको छ ।
मधेशमा अभिभावकलाई आफ्ना चेलीवेटीलाई बाहिर पठाएर पढाउन कठिन छ। अभिभावकहरुमा चिन्ता छ त्यो चिन्ता केही हदसम्म पूरा भएको छ । यस नगरपालिकामा एकहदसम्म उच्चस्तरको शिक्षाको गणतब्य बनाउनु पर्छ ।गौशाला नगरपालिकाले पहल गरेर त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास नेपाल सकारकारकोे सूचीमा राख्न सफल भएको छ ।प्रदेश नम्बर २ कै एउटा नमूना विद्यालय बनाउने काम भइरहेको छ ।
गाशौलाका सबै वडालाई सडक सञ्जालसंग जोड्न रिङ्ग रोडको डीपिआर तयार गरिएको छ । अबौं रकम लाग्ने भएकाले संघीय सरकारसंग बजेट माग गरिएको छ । सडक बनाएर गाउँमा नगर बस संचालन गर्ने योजना नगरपालिकाको छ ।
गौशाला नगरपालिकाका प्रमुख शिवनाथ महतोले चुनावी प्रतिबद्धताको ९०% काम गर्न सकेको बताउँछन् ।
गौशला नगरपालिकामा सबै कार्यहरु अनलाइन माध्यमवाट हुंदैछ त्यस्तै अनलाईनबाट जेष्ठनागरिकहरुको समाजिक सुरक्षाभत्ता सिधै बैंकमा पठान्छ ।
अहिले गौशला नगरपालिले आफ्नै कार्यलय भवन निर्माण गरेको छ । मेयरमा शिवनाथ महतो जितेर आएपछि एक विघा जग्गा खरिद गरेर ५ करोड ६० लाखको लागतमा भवन निर्माण गरियो ।
वडाहरुमा कालोपत्रे तथा पक्की सुविधा सम्पन्न बाटाघाटाहरु निर्माण गरिएको छ । गौशला मा. वि. देखि खाल्टो बजारसम्म झण्डै ३ किलो मिटर बाटो निर्माण गरिएको छ । विपन्न परिवारहरुको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउन बगर खेती सुरु गरिएको छ ।
नदी उकास बगर जमिनमा सिचाईको व्यवस्था गरेर मुसहरहरुलाई पनि तरकारी खेतीमा अवबद्ध गराइएको छ । गरिबहरुलाई बाख्रा वितरण गरिएको छ । नमुना वाख्रा पालन खोर निर्माण गरेर एक घर परिवारलाई चार वटा बाख्रा र एउटा बोका प्रदान गरिएको छ ।उनीहरु पनि आयआर्जनका हिसाबले अगाडी बढिरहेका छन् ।
नगरपालिकामा रहेको मुसहर समुदायका बच्चाहरुलाई स्कुलमा राम्रोसंग पढाउन सकिन्छ भनेर दैनिकै पहल गरेर बालबालिकाहरुलाई स्कुल पठाउने काम भइरहेको छ । यहाँ विपन्न परिवारका लागी छानो कार्यक्रम ल्याइएको छ । पुसको घरमा जस्तापताको छानो हाल्न एक घरपरिवारलाई ५० हजारको व्यवस्था गरिएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा पनि अहोरात्र खटेर जनप्रतिनिधिहरुले जनताको जीवन रक्ष ागर्न कुनै कसर राखेनन् । अस्थाई कोभिड–१९ अस्पताल संचालन गरेर त्यहाँ अक्सिजन सहितको आइसोलेसन व्यवस्था गरियो । थुप्रै कोरोना संक्रमितहरु उपचार लिएर निको भए ।
अहिले पनि हामी कोभिड अस्पताल संचालानमै राखिएको छ, जति बेलापनि फेरि कोरोना महामारी फैलिन सक्छ । यसलाई आउँदो दिनमा पुरै व्यवस्थित गरेर जान अक्सिजन सिलिन्डर नपाए पनि इलेक्ट्रोनिक अक्सिजन मेसिनको व्यवस्था नगरपालिकाकाले गरेको छ । कोभिडका विरामीलाई घर देखि अस्पतालसम्म ल्याउन र पुर्याउन एम्बुलेन्स को व्यवस्था मिलाइएको छ । बिरामीका लागि खान,औषधी उपचार सबै निःशुल्क व्यवस्थान नगरपालिकाको तर्फबाट गरिएको थियो ।
खहरे खोला नदीले गौशाला नगरपालिका घेरिएको छ । पश्चिममा बाँके पर्छ । महोत्तरी र सर्लाहीको सीमा भएर बग्छ । त्यस्तै मरहा खोला गौशालाको वडा नम्बर ९ र १० मा पर्छ । सोनी खोला वडा ८ बेलगाछी नजिकै पर्छ । त्यस्तै भूलन खोला वडा न. १२ र ११ को विचमा पर्छ। जंगहा खोला बर्दिबास र गौशला नगरपालिकाको बीचबाट बग्छ । यी खोलाको मुहान चुरे पर्वत पहाडमा पर्छ । यसले प्रत्येक वर्ष जनतालाई दुःख दिइदैं आएको छ । चुरेको भावर क्षेत्रबाट खोलानाल बग्ने भएकाले यसको सरक्षण सम्बद्र्धनको आवश्यकता छ । यसलाई दोहनबाट बचाई बहुपयोगी बनाउन पनि त्यतीकै जरुरी छ ।
खोलाले हजारौ विघा जमिनलाई कटान गरेर बगर बनाइसकेको छ । जनताका तट्बन्धबाट बाँध निर्माण जारि छ ।तर, बजेट अभावमा नदी संरक्षणको कामले निरन्तरता पाउन सकिरहेको छैन । बाढी नियन्त्रण गरेर खेतीयोग्य जमिनलाई बचाउन अति आवश्यक छ ।
यहाँ थुप्रै ऐतिहासिक पोखरी र मुल हरु छन्। निगौल ठाकुर पोखरी , मोहलनीय पोखरी , पचाई पोखरी लगाएतका थुप्रै प्रकृति स्थलहरु बन्ने ठाउँ छ ।
गौशाला नगरपालिकाको वडा न.१ स्थित रामनगरमा पर्ने बाँनह टोल पोखरीलाई व्यवस्थित गर्न डिपिआर तयार गरिएको छ । यसलाई संरक्षण र विकास गर्न ७ करोड खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
गौशाला– ३ नबराजपुरमा पर्ने प्राकृतिक पचाइन पोखरीलाई प्रयटकीय पोखरीका रुपमा निर्माण थालिएको छ । ७ करोडको लागतमा यस पोखरीको संरक्षणको काम अगाडी बढाइएको छ ।
पर्यटकीय पोखरी निर्माणसंगै छठ पर्व मनाउनलाई घाटको व्यवस्था गरिने छ । त्यहाँ पिकनिक स्पोट बनाइने छ । गौशाला नगरपालिका भित्र धेरै पोखरी हरु छन् सबैलाई विस्तारै नगरपालिकाले व्यवस्थित गर्दै लगेको छ ।
सबै पोखरीहरु संरक्षित भयो भने माछा पालनबाट नगरपालिकालाई बार्षिक २० करोडसम्मको आम्दानी हुन्छ । पोखरी संरक्षणले चुरेको भावर क्षेत्रमा पानी भण्डारमा सहयोग पुग्छ ।
गौशालामा गौशाला बजार भएकोले पनि यहाँको सम्भावना बढेर गएको छ । महोत्तरीको सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक बजार, गौशाला बजार छ । यसलाई नगरपालिकाले व्यवस्थिति गर्न खोज्दै छ । बजारको स्तरीकरण गर्न नाला निर्माण, पक्की सडक निर्माणको काम भइरहेको छ ।
गौशाला क्षेत्रमा उद्योगहरु फष्टाउने ठूलो सम्भावना छ । चारै तिरको केन्द्र पर्छ । यहाँ सार्वजनिक जमिनहरु पनि छन्। गौशाला नगरपालिकाले १२ विघा क्षेत्रफलमा औधोगिक ग्राम निर्माण पनि थालेको छ ।त्यसका लागि भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ ।
आयुर्वेद कलेज संगसंगै जडीबुटीको खेती त्यसमा जोइएको छ । खोलाको छेउछाउमा नदी उकास जग्गाहरू पनि यसलाई व्यवस्थीत गर्छ ।
जडीवुटी उत्पादन गर्न प्राविधिकहरुलाई ल्याएर नगरपालिकाले अवलोक गराइसकेको छ । जडीबुटी उत्पादनका लागि नगरपालिकाले नै लगानी गर्ने र नगरपालिका ले नै उचित मूल्यमा खरिद गरिदिने योजना अघि बढाएको छ ।
गौशाला नगरपालिकाको आम्दानीको मुख्य श्रोत पोखरी र नदी छ ।गौशला नगरपालिकाको ९ जनाको संख्यामा आफ्नै नगर प्रहरीे छ ।
क्याटेगोरी : ब्रेकिङ्ग न्युज-१, मुख्य समाचार, विविध, समाज